ဒါဘီပွဲတွေဟာ ဘယ်လောက်အထိအရေးပါကြောင်းကို ပြောလာတဲ့ မိုက်ကယ်ကားရစ် – FBV SPORT NEWS
ဒါဘီပွဲတွေဟာ ဘယ်လောက်အထိ အရေးပါကြောင်းကို ပြောလာတဲ့ မိုက်ကယ်ကားရစ်
မန်ချက်စတာယူနိုတက်အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ကနေ လိုက်ဇက်အသင်းကို ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်ဆိုးရွားတဲ့ ခြေစွမ်းရလဒ်များနဲ့ အတူ အိမ်ပြန်ခဲ့ရပါပြီ……
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာ အစဉ်အလာ သမိုင်းအလွန်ကြီးမားပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ ဒါဘီပွဲစဉ်ကို မန်စီးတီး အသင်းနဲ့ လာမယ့် စနေ့ည မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်….
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်းမှာ ဒါဘီပွဲစဉ်ပေါင်း (၁၈၂) ပွဲကစားခဲ့ပြီး မန်ယူ က ၇၆ ပွဲနိုင်ကာ မန်စီးတီးက (၅၄) ပွဲ နိုင်ပြီး သရေ (၅၂) ပွဲဖြင့် မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ အများဆုံးအနိုင်ရထားခဲ့ပါတယ်…
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်စ် လက်ထောက်နည်းပြ မိုက်ကယ်ကားရစ်က ဒါဘီပွဲစဉ်တွေဟာ ကစားသမားဘဝမှာရော နည်းပြဘဝမှာရော ဘယ်လောက်အရေးပါခဲ့ကြောင်းကို Sport Tribble News မှာပြောလာပါတယ်…
မိုက်ကယ်ကားရစ်က ” ကျနော်တို့ ဒါဘီပွဲစဉ်တွေ တိုင်းမှာ ကစားသမားဘဝမှာလည်း ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ခဲ့ကြတယ်…အားလုံး ရှိသမျှခွန်အားတွေစိုက်ထုတ်ပြီး ရုန်းကန်ခဲ့ကြတယ်…..ကျနော်တို့ အတွက် ဒါဘီပွဲက အနိုင်က ရရှိတဲ့ စိတ်ခံစားမှု က ရာသီဝက်လောက်အထိ ကျနော်တို့စိတ်ကို တက်ကြွနေစေခဲ့တယ်….
နည်းပြဘဝမှာလည်း ဒီလိုဘဲ ဒါဘီပွဲတိုင်းကွင်းပြင်ကနေ ကျနော် ငြိမ်ငြိမ်မနေနိုင်ပါဘူး….ကိုယ့်ကစားသမားတွေကို လိုက်အော်ပြီး ပြောနေရတာတွေ အဝတ်လဲခန်းထဲမှာ အသင်းအတွက် ပေးဆပ်ဖို့ ဒါဘီပွဲတိုင်း နိုင်ပြီး မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ သမိုင်းကို မဖျက်ဖို့ အမဲစက်ထင်အောင် မလုပ်ဖို့ ကို ကျနော်ပြောခဲ့ရပါတယ်…..
နည်းပြီကြီးဆိုးရှားအနေနဲ့ အားစိုက်ထုတ်မှုတွေလုပ်လာမယ်ဆိုတာတော့ ကျနော်ပြောနိုင်ပါတယ်…အိုလေဟာ အရမ်းအနေအေးပြီး ကစားသမားတွေကို ပေါ်မှာလည်း အရမ်းငဲ့ညာသူပါ အဲ့ဒီအတွက် ဒါဘီပွဲဟာ အိုလေက သွေးအေးနေရင်တောင် ကျနော် သွေးအေးမနေပါဘူး ဆိုပြီး “..Sport Tribble မှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်…